पत्रकारितामा भर्खरै १०० मा ५ कुरा सिके !
जिन्दगीको यात्रामा केही गर्ने उत्साह लिएर म यात्रारत रहे । यी पाईलाहरूले चाहेको सफलता पनि प्राप्त भयो । यस्तो सुखद परिस्थितीमा पनि म हर्ष विमुख भए । शायदै म पैसाका लागि यो पेशामा होमिएको भए एक अंश पनि म आफुलाई परिचित हुने मौकाबाट बन्चित बन्थे होला । सदा मनमा यो समकालिन समयमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा बाँधिएर आदरणीय दाजुहरूबाट प्रेरणा पाईरहे । आजको दिन सम्म मैलै के पाए र कति सफल भएँ लेखाजोखा छैन । तरपनि मैलै गर्व साथ घोषणा गर्नुपर्छ की वहाँहरूको यस्तो हौसला र मित्रवत् सहयोग नभई दिएको भए म आज जुन चुलीमा रहेको महसुस गरिरहेको छु । त्यहाँ पुग्नको लागि मैलै अझै जिन्दगीका कति वर्षरू खर्चिनु पर्थ्यो होला ।
कुरो व्यक्तिगतबाट जोडिएकोले माथिका प्रंसगहरु उठेका हुन् । पहिलो अबस्था फेरि छापातिर सम्बन्धित हुने सोच पलाएको थियो । तर सचारले मारेको फड्कोको साथमा अघि बढ्ने लालसा पनि थियो । त्यही भएर आधुनिक सचारजगत अर्थात साईट पत्रिका प्रकाशनतिर विचारलाई अन्तिम निष्कर्ष बनाए । यही योजनामा मित्र खोज्न थाले । विभिन्न वेव डिजाईनर भेटे । क्यानको ईन्फोटेकले मेरो योजनाबद्ध कदमलाई निकै सहयोग पुरयाएको छ । विभिन्न पक्षसित निकै गफगाफ पनि भयो । कामको ’boutमा छलफल पनि भयो । मनले ती सम्बन्धहरु स्विकार गर्ने सकेनन् । यो मन निराश भयो । तर शुरुवातले नयाँ सम्बन्धको जन्म दिएको रहेछ । आधुनिक सम्बादयन्त्रमा अर्का एक साथी भेट्टिए । प्रथम यात्रा जस्तै यो पनि शुरु भयो । त्यो साथीको आत्मविश्वास र विश्वासीपनले मनमा आशा र कामको योजनाहरुले निर्णायक विसर्जन पाउनेमा ढुक्क भएँ ।
This entry was posted on अगस्ट 17, 2011 at 6:20 अपराह्न and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.
ट्यागहरु: अनलाईन पत्रकारिता, टिभी पत्रकारिता, पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता